Nilaza i Rosia Fa Nanery Ny Twitter Hamafa Kaonty Hosoka Ny Roscomnadzor · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2014 3:35 GMT
Handeha hoany Moskoa ny lehiben'ny Twitter misahana ny politikam-bahoaka manerantany, Colin Crowel amin'ny herinandro hoavy mba hifandinika amin'ny sampam-pifandraisana federaly ao Rosia, Roscomnadzor. Alohan'izany fitsidiana izany, nilaza ny Roscomnadzor fa nanery ny Twitter hamafa kaonty hosoka milaza fa mpanao politika Krimeana i Vladimir Konstantinov. “Sokajiana ho fampiasana tsy ara-dalàna ny tahiry manokana sy fanitsakitsahana ny lalàna ao amin'ny Federasiona Rosiana ireo fikasana hisoloky olona malaza ao amin'ny tambajotra sosialy”, araka ny nolazain'i Roscomnadzor tamina fanambarana ampahibemaso tamin'ny 20 Jiona.
Nofafan'ny Twitter tokoa ilay kaonty voalaza, @konstantinov_rc, izay nipoitra tamin'ny fiafaran'ny volana Aprily 2014, ary nandefa sioka 78 fotsiny sy nahasarika mpanaraka 1673 nandritra ny fotoana fohy nisiany. Tsy tahaka ireo kaonty maka-tahaka malaza marobe an'ny RuNet, tsy niezaka naneso na nampiala-voly ilay olona nisovoka ho Konstantinov ao amin'ny Twitter. Tsy dia mahaliana avokoa ny ankamaroan'ireo sioka nalefan'ilay kaonty, tahaka ireo hafatra mizara vaovao momba ny fanovana momba ny tena manokana, ny antontanisan'ny governemanta, ary ny fanomanana vakansy any Krimea.
Na dia nilaza aza ny fanambarana an-gazety nataon'i Roscomnadzor fa noterena hankatò ny lalàna Rosiana ny Twitter, dia manitsakitsaka miharihary ny politika anatiny manokana an'ny Twitter mikasika ny “fakàn-tahaka, fanehoan-kevitra, sy ny mpanaraka ny kaonty” ilay kaonty hosoka an'i Konstantinov izay mandrara ny fakàn-tahaka tsy misy fanambarana mazava mankatò ny sarin'ny mpiserasera (tompon'ny kaonty), anaran'ny kaonty, sy ny dikam-piainana vita. Nilaza fandresena tamin'ny fametrahana fitsipika tamin'ny Twitter ireo manampahefana Rosiana tamin'ny volana lasa, izay nanaiky hanakatona ny kaontin'ny vondrona nasionalista hiringiriny Okraniana . (Voafetra loatra anefa ny fampanajana lalàna azon'ny Twitter natao, na dia izany aza, satria afaka midify mora foana ny fetra ny mpiserasera amin'ny alalan'ny fanovana ny toerana misy ny kaontin'izy ireo.)